တစ် ဦး ချင်းစီ၊ မိသားစုများနှင့်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့ခြင်း။
ကျွန်တော်တို့၏ စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ လုပ်ငန်းရှင်ဗီဇာ၊ လုပ်ငန်းရှင်ဗီဇာ၊ ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်သောဗီဇာ၊ အများပြည်သူစတင်လျှောက်ထားသည့်ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန်။
သင်၏စာမျက်နှာလမ်းညွှန် | ဖွင့်
စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ မိမိကိုယ်ပိုင်လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ဗီဇာအစီအစဉ်၊
ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးပေး စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးမှတဆင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီအကောင်းဆုံး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျအကောင်းဆုံး စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများအကောင်းဆုံး စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံအကောင်းဆုံး စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ နှင့်အကောင်းဆုံး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီ.
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ရောင်းချရန်ရရှိနိုင်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ၀ န်ထမ်းများငှားရမ်းခြင်း၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်းမှ စတင်၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်လွယ်ကူစေသည်။
စျေးနှုန်းချိုသာသောဝန်ဆောင်မှုများ စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဘို့ သင်၏အောင်မြင်မှုအတွက်တရား ၀ င်ထွင်းထုထားသည်
သန်းနှင့်ချီသောထုတ်လုပ်သူများမှကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၊ မိသားစုများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကုမ္ပဏီများအားစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ဗီဇာများကိုအကူအညီတောင်းရန်၊ အစီအစဉ်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလမ်းညွှန်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုလမ်းညွှန်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့အပေါ် အခြေခံ၍ မှန်ကန်သောဖြေရှင်းနည်းများရှာဖွေရန်ကူညီခြင်း ရည်မှန်းချက်များနှင့်မျှော်မှန်းချက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်ကမ္ဘာတလွှားမှအိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ ကနေဒါ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ သြစတြေးလျ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ နယူးဇီလန်၊ ဥရောပ၊ တောင်အမေရိက၊ ဗီဇာ၊ ယာယီနေထိုင်ခွင့်၊ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်လျှောက်ထားခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်သောဗဟုသုတနှင့်မိတ်ဖက်များကကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်မှုကိုထိရောက်စွာထိရောက်စွာထိရောက်စွာလမ်းပြနိုင်ရန်ကူညီသည်။
စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး တစ် ဦး တည်းဖြစ်စေ၊ မိသားစုနှင့်ဖြစ်စေတိုင်းပြည်အသစ်တစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးစတင်ရန်လိုလားသူများအတွက်ဖြစ်သည်။
သန်းနှင့်ချီသောထုတ်လုပ်သူများမှကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၊ မိသားစုများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကုမ္ပဏီများအားစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ဗီဇာများကိုအကူအညီတောင်းရန်၊ အစီအစဉ်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလမ်းညွှန်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုလမ်းညွှန်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့အပေါ် အခြေခံ၍ မှန်ကန်သောဖြေရှင်းနည်းများရှာဖွေရန်ကူညီခြင်း ရည်မှန်းချက်များနှင့်မျှော်မှန်းချက်။ ၄ င်းတို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်ဆန္ဒရှိပြီးစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပုံစံ ၂ မျိုးကိုကမ်းလှမ်းသောအတွေ့အကြုံရှိသောအထူးကျွမ်းကျင်သူများကိုကြိုဆိုသည့်နိုင်ငံများစွာရှိသည်။
လျှောက်ထားသူ (များ) သည် -
(၂) လုပ်ငန်းတွင်ဆက်လက်တက်ကြွစွာစီမံခန့်ခွဲရန်။ နှင့်
(၃) စွန့် ဦး တီထွင်လျှောက်ထားသူနှင့် ၄ င်းတို့၏မိသားစု ၀ င်များ မှလွဲ၍ နိုင်ငံ၏နိုင်ငံသား (များ) အတွက်အချိန်ပြည့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးပါ။
●လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်။
●လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေး
တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်မိသားစုများအတွက်အထူးစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအထောက်အပံ့။
ကျနော်တို့ပေး စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်အတွက်အခမဲ့တိုင်ပင်လူသိများသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်၊ စွန့် ဦး တီထွင်သူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်၊ လူသစ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်၊
မှတ်စု* “ တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့အစိုးရကထုတ်တဲ့အစီအစဉ်တွေရှိတယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ် နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နေထိုင်လည်းအဖြစ်လူသိများ ရွှေဗီဇာ မြန်ဆန်သောလျှောက်လွှာတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ဤအစီအစဉ်ကိုသင်စိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ ဒီအစီအစဉ်တွေအတွက်အထူးကူညီပံ့ပိုးပေးတယ်”
စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေရှေ့နေသည်သင်၏အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတွက်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များပေးလိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
● ပရိုဖိုင်းကိုအကဲဖြတ် စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဘို့။
●မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
● Net Worth အကဲဖြတ်မှု နှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစီးပွားရေးအစီအစဉ်။
● စီးပွားရေးအင်တာဗျူးများ Incubators နှင့်အတူ။
လိုအပ်ပါက ၀ န်ထမ်းစိစစ်အတည်ပြုသင်တန်း။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ, တတ်နိုင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျ, တတ်နိုင် စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံ, တတ်နိုင် စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ နှင့်တတ်နိုင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီ.
(ကျွန်ုပ်တို့ကထောက်ပံ့မှုနှင့်အခြား ၁၀၆ နိုင်ငံကိုထောက်ပံ့သည်)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုထူထောင်ရန်သင်သည်နိုင်ငံအသစ်တစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့သောအခါ၊ သင့်တွင်ကောင်းသောတစ်ခုရှိရန်အရေးကြီးသည် မိတ်ဖက်, သင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အချိန်သက်သာစေခြင်းငှါ, သင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများမှာသင်လိုအပ်အခြားအထောက်အပံ့များကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
စီးပွားရေးလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးမှအကြံပေးခြင်းအပြင်အခြားစီးပွားရေးနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းပေးပါသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှပင်စဉ်း စား၍ မရနိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလိုအပ်သည့်အရာအားလုံးအတွက်ပံ့ပိုးမှုများစွာကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောမိတ်ဖက်ဖြစ်လာသည်။ ဤအရပ်မှတစ် ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်နေရာတည်းမှာဖြေရှင်းချက်ပံ့ပိုးပေး နှင့် 106 နိုင်ငံများ.
တစ် ဦး ချင်းစီ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်မိသားစုများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီရန်အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါတယ်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများမှစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုကျော်။ မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူမဆိုသို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။
စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် (ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းသည်မည်သည့်ဒေသတွင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူထက်မဆိုစျေးသက်သက်သာသာရှိသည်။ )
သင်၌ကမ်းလွန်စီးပွားရေးတည်ဆောက်မှုရှိပါကသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်ပါသည် setup ကိုကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ.
မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုပြောင်းရွှေ့ရန်လိုအပ်လိမ့်မည် ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး, သင်တစ် ဦး ဝယ်ဖို့ကူညီနိုင်သည် လက်ရှိစီးပွားရေး သင့်ရဲ့ချက်ချင်းစတင်ဘို့ရောင်းချသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ HR အတိုင်ပင်ခံသည်သင့်အားအဖွဲ့ငှားရန်ကူညီနိုင်သည်။ ငါတို့ လူအင်အားကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။
အပါအဝင်စျေးသက်သာ VoIP ဝန်ဆောင်မှုများ virtual နံပါတ်များ နှင့်စီးပွားရေးဖုန်းများ, ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချကူညီရန်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း 101 ။
နိုင်ငံခြားသားတစ် ဦး သို့ပြောင်းရွှေ့သောအခါသင်သည်သင်၏ငွေရေးကြေးရေးကိုကြိုတင်စီစဉ်ထားရန်လိုအပ်သည်။ ထိုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကြေးအရင်းအနှီး၊ ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုသို့မဟုတ်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်စာရင်းအင်းအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိရှိကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ cryptocurrency လဲလှယ်လိုင်စင်.
သင်ဂုဏ်သတင်းလိုအပ်လျှင် virtual ရုံးလိပ်စာ သင်၏စီးပွားရေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနသို့ဆက်သွယ်ပါ။
စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့၏အထောက်အပံ့များအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန် setup ကိုစီးပွားရေးစီးပွားရေးအပေါ် အခြေခံ၍ ပြောင်းရွှေ့လိုသောရိုးသားသူများအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
စီးပွားရေးအကြံဥာဏ်များကိုအခမဲ့ရယူပါ အကြွေး နိုင်ငံတကာငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူကဒ်အပြောင်းအလဲနဲ့။
Startup လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အိုင်တီ Solutions
အကယ်၍ သင်သည်လုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချခြင်း (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြန်လည်နေရာချထားခြင်းဖြစ်ပါကသင်အွန်လိုင်းအားကောင်းရန်လိုအပ်သည်၊ အောက်ဖော်ပြပါအိုင်တီ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်တရား ၀ င်စီးပွားရေးဆိုင်ရာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းတို့အားရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းမှုများဖြင့်အကောင်းဆုံးဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးသောအတွေ့အကြုံများကိုပေးအပ်သည့်ဂုဏ်သတင်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည်လိုင်း၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်
Professional စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့
Value Added န်ဆောင်မှုများ
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်သို့မဟုတ်ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်အမှီအခိုကင်းသောကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုအနေနှင့်လူတိုင်းသည်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများစီမံခန့်ခွဲခြင်းသာမကသာမကသူတို့၏ကုမ္ပဏီ၏ရေတိုနှင့်ရေရှည်အောင်မြင်မှုကိုသေချာစေရန်အတူတကွစိန်ခေါ်သည်။ သို့သော်စီးပွားရေးလုပ်ရန်ကုန်ကျစရိတ်များမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်လိုက်နာမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုပိုမိုဖန်တီးပေးသောကြောင့်၊ ဤခေတ်သစ်တွင်ဆက်လက်ရှင်သန်ရန်မည်သို့ဆက်လက်ရှင်သန်မည်ကိုသင်စဉ်းစားမိလိမ့်မည်။
တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လုပ်ငန်းစဉ် - Start မှအောင်မြင်မှုသို့
အဆင့် 1: တစ် ဦး ချင်း / မိသားစု / စီးပွားရေး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖော်ထုတ်ပါ။
အဆင့် 6: စာရင်းကိုင်နှင့်အခွန်အကွံဉာဏျ, ရှိလျှင်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးအတွေ့အကြုံနှင့်စီးပွားရေးဝန်းကျင်ကကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်အဖြေများဖန်တီးပေးသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မြင့်မားသောအောင်မြင်မှုနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
အကယ်၍ သင်၏စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပျက်ကွက်လျှင်၊ အစီအစဉ် (ခ) ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုရှိသည်။
အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့မပံ့ပိုးပါ။
●စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု ကုန်သည်များသို့မဟုတ်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများကိုပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု VoIP ၏နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းသူလျှိုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမှုမရှိပါ။
●လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေး န်ဆောင်မှု အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
●စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ် ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောလူများ၏ကိုယ်အင်္ဂါများကိုအထောက်အပံ့မရရှိနိုင်ပါ။
●ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူတွေကိုစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးမပေးပါဘူး။
●ငါတို့ ရှေ့နေများ မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းလုပ်ငန်းတွင်အထောက်အကူမပြုပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏ KYC များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျသေချာစေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ Residency သို့မဟုတ်အလုပ်ပါမစ်လျှောက်ထားမှုကိုအတည်ပြုရန်အာဏာပိုင်များကငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးသည်များသောအားဖြင့်အလွန်ရှုပ်ထွေးသောနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစစ်မှန်သောဆက်နွယ်မှုတွင်သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်းပါဝင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ Million Makers တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများနှင့်စိတ်ရှည်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များနှင့်အခါအားလျော်စွာတွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ် ၄ င်းတို့ရရှိနိုင်မှုပေါ် မူတည်၍ ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်ခြင်းပြုလုပ်သည်။ ဤအစည်းအဝေးများသည်၎င်းတို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်အလားအလာရှိသောအစီအစဉ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဆုံးဖြတ်နိုင်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်များ၊ မူဝါဒများသို့မဟုတ်အလေ့အကျင့်များဖြစ်သည်။ ဤအတိုင်ပင်ခံများနှင့်အစည်းအဝေးများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အပိုအပိုငွေမပေးပါ။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး
စီးပွားရေးရွှေ့ပြောင်းမှုဟုလည်းလူသိများသောစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုဆိုလိုသည်မှာသင်၏စီးပွားရေးကိုတည်ထောင်ခြင်းအားဖြင့်စီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်၊ နေထိုင်ရန်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ရန်အခွင့်အရေးနှင့်အတူနေထိုင်ခွင့်ရှိသည်။ စီးပွားရေးဗီဇာ၊ စီးပွားရေးလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးမှတဆင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျအကောင်းဆုံး စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများအကောင်းဆုံး စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ နှင့်အကောင်းဆုံး စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံအကောင်းဆုံးမှာအလုပ်လုပ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများနှင့်အကောင်းဆုံး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှ.
စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျ | စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျအကောင်းဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများအကောင်းဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ နှင့်အကောင်းဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံအကောင်းဆုံးမှာအလုပ်လုပ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများနှင့်အကောင်းဆုံး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှ.
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ စျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စျေးနှုန်းချိုသာတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံ | တတ်နိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
လုပ်ငန်းရှင်ဗီဇာ၊ လုပ်ငန်းရှင်လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးအပေါဆုံးမှတဆင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျအကောင်းဆုံး လုပ်ငန်းရှင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများအကောင်းဆုံး လုပ်ငန်းရှင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ နှင့်အကောင်းဆုံး လုပ်ငန်းရှင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံအကောင်းဆုံးမှာအလုပ်လုပ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများနှင့်အကောင်းဆုံး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှ.
စျေးအသက်သာဆုံးလုပ်ငန်းရှင်လူ ၀ င်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများ စျေးအသက်သာဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စျေးအသက်သာဆုံးလုပ်ငန်းရှင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စျေးအသက်သာဆုံးလုပ်ငန်းရှင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စျေးအသက်သာဆုံးလုပ်ငန်းရှင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေး | စျေးအသက်သာဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်သောဗီဇာ၊ ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ အထောက်အပံ့ပေးသည့်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်အတွက်လျှောက်ထားပါ Self- အလုပ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းမှတဆင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျအကောင်းဆုံး Self- အလုပ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများအကောင်းဆုံး Self- အလုပ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ နှင့်အကောင်းဆုံး Self- အလုပ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံအကောင်းဆုံးမှာအလုပ်လုပ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများနှင့်အကောင်းဆုံး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှ.
ထိပ်တန်းကိုယ်ပိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ ထိပ်တန်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ | ထိပ်တန်းကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ထိပ်တန်းကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ထိပ်တန်းကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံ | လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
Startup ရွှေ့ပြောင်းမှုဟုလည်းလူသိများသော startup လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်တူညီသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစတင်လုပ်ကိုင်လိုသူ၊ နေထိုင်သူများဖြစ်လိုသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
ကန ဦး စတင်လျှောက်ထားသည့်ဗီဇာ၊ လူသစ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ လျှောက်ထားသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်လျှောက်ထားပါ startup လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှတဆင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျအကောင်းဆုံး စတင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများအကောင်းဆုံး startup လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ နှင့်အကောင်းဆုံး startup လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံအကောင်းဆုံးမှာအလုပ်လုပ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများနှင့်အကောင်းဆုံး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှ.
တန်ဖိုးနည်း Startup လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ဆောင်မှု | တန်ဖိုးနည်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျ | တန်ဖိုးနည်း startup လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ | ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ တန်ဖိုးနည်း startup လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံ | တန်ဖိုးနည်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတွက်တရား ၀ င်အထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စီးပွားရေးလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များသည်ကုန်ကျစရိတ်မကြီးပါ။ စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခကိုသာသင်တောင်းခံသည်။
သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နေထိုင် ဖြေရှင်းချက်။
အကယ်၍ သင်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်လိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ် ဖြေရှင်းချက်။
သင်ရွှေဗီဇာကိုစိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ ရွှေဗီဇာ ဖြေရှင်းချက်။
ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်ကိုသင်စိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ် ဖြေရှင်းချက်။
EB5သည် USA အတွက်အသုံးပြုသောဝေါဟာရဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်၍ အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည်။
စီးပွားရေးအရရေနံရှာဖွေခြင်းနှင့်စီးပွားရေးရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်စူးစမ်းလေ့လာမှုဝန်ဆောင်မှုများ၊
အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှာဖွေရေးအတိုင်ပင်ခံ | အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှု | အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဆိုင်ရာရေနံရှာဖွေရေးအထောက်အပံ့ အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးရှာဖွေရေးအကူအညီ
စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုမည်သည့်နိုင်ငံမှမဆိုနိုင်ငံသားများကအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အာရှမှစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ အာဖရိကမှစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ ဥရောပမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ တောင်အမေရိကမှစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ မလေးရှားမှစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ သီရိလင်္ကာမှစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ နီပေါမှစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ အိန္ဒိယမှစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ယူအေအီးမှစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
စီးပွားရေးနှင့်ဆိုင်သောလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သန်းချီသောထုတ်လုပ်သူများမှာစီးပွားရေးနှင့်ဆိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အမြားကိုထောက်ပံ့ပေးပြီး၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှပင်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့အဖြေများကိုအစပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာကြီးနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား“ စီးပွားရေးအတိုင်းအတာများ” ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုအပြိုင်အဆိုင်များသောစျေးနှုန်းဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးနေသည်။
WE တစ်ခုတည်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော IMMIGRATION SOLUTION PROVIDER!
စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှ 106 နိုင်ငံများ!